Taliska Adis ababa wuxuu gacanta ku dhigay in badan oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka mid ah quluubtooda wuxuuna u carbiyay dhaqan xumada, maamuus, la’aanta & xishood yaraanta oo intuba isaga agtiisa tayo kaleh. Wuxuu tartansiiyay ficil kooda isagoo colaado dadban ka dhex huriyay si ay isugu mashquulaan isagana ay ugu sii dheeraato mudada uu shacabka Ogaadeenya ee keenadiidka ah sii gumaysan. Waxay ardaydiisu u baraatmeen Itoobiyaanimadii waagii hore laysku caayi jiray ee ay Soomaalidu isku odhan jirtay ruuxa la fogaynayo waa Amxaar Nin waliba wuxuu ku dhaqaaqay wixii loo diray si uu ugu raali noqdo Malas oo ah ninka ay talada maroorta ee Itoobiya & xasilooni daraduba gacantiisa ka soo fusho.
12 sano ayaa laga joogaa xiligii ay bilaabatay iibinta dadka Ogaadeenya arintani wagaas ay shacbka Ogaadeenya ku bilaabatay ka hor Soomaalida dhexdeeda kama jirijirin waxayse noqotay xiligaas wixii kadambeeyay wado furan oo loo maro dhogorta dadka Ogaadeenya sidii loo heli lahaa. Arinta waxaa jideeyay Maamulka W/Galbeed Soomaaliya oon ku hakanin kol & laba toona waxaana xaqiiqo ah inay dunuubta kadhalatay & ta kadhalan doontaba iyagu mas’uul ka yihiin aduun & aakhirba.
Hadaba waa mucjiso aan hubo in ay igla midaysan yihiin dadka Ogaadeenya ee xalaasha ah ayna la reemayaan waa arin aan kabaxaynin maskaxda wadaniga Ogaadeenya taariikhina ah waa arin reer Garoowe book cusub oo madaw u furtay.
Maantana Maamulka Garoowe waxay iibintii ku soo kodhiyeen inkiraad hadaba waxaan qaadan la’ahay cid iga qancisana aanan wali helin sababta loo dafiray ragga cadawga loo dabray miyay qarsoomi karaan Ragga waawayn ee duhurka la iibiyay waxar ayaaba hadad qalato habeen gudcur ah aan raqdeeda laqarin karine sidee loo dadi karaa rag qoodh & xeraale ah. Mise maamulka Garoowe waxaan la siinin kharashkii lagula heshiiyay oo amaah ayay Mas’uuliyiintanadii ku bixiyeen oo sidaas darted ayaa loo dafiray? mise maamulka Garoowe wuxuu rabaa inuu ONLF & Tigreega labadaba kanabad galo?
Waxaan ka codsanyaa dadka Soomaaliyeed een iygu damiirkoodii dhiibin inay ka fikiraan waxa naloo gaysanayo & waxa aanu raadinayno waana muhiim in aad loo darso falalka dadka Ogaadeenya loo gayasnayo waxa kadambeeya & cida mas’uulka ka ah. Ninkii moodaya in halgankanaga loo leexin karo meelkale waxaanu u sheegaynaa in hadafaknagu yahay in aanu ka madax banaanaano gumaysiga aanaan waxba wadaagin ee doolka noogu yimid cidii xabada dhamacad ah ee wiilasha tigeega ah ku dhacaysa isaga dhigaysa waxaanu leenahay kajoog hadii ay maqli weyadna waxa laga hor joogaayi waa taraysada ay u adkaysan layihiin Aabsiiniyiintii ku riyoon jiray inay awood leeyihiin.